3 Shuruud oo Kenya ku xirtay Xalinta Khilaafka Soomaaliya - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > 3 Shuruud oo Kenya ku xirtay Xalinta Khilaafka Soomaaliya
February 18, 2019 February 18, 2019 admin738
SADDEX SHURUUD OO KENYA KU XIRTAY XALLINTA KHILAAFKA SOOMAALIYA.
Kenya ayaa markale soo bandhigtay saddex shuruud oo ay ku xirtay xalka khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex oogmay Nairobi iyo Muqdisho.
Dawladda Kenya waxay rabtaa:-
1) Waa inay Soomaaliya dib uga noqotaa khariidada badda ee lagu soo bandhigay shirkii London ee 7da Febraayo. Kenya ayaa aaminsan in qeyb ka mid ah dhul badeedka lagu xusay khariidada ay tahay qeyb ka mid ah dhulka Kenya.
2) Waa inay Soomaaliya ku wargelisaa shirkadaha iibsaday xirmooyinkii lagu xaraashay shirkii London, inaanay Soomaaliya lahayn dhul badeedka ku xusan xirmooyinka ay Soomaaliya soo bandhigtay.
3) Kenya waxay dooneysaa in muranka dhul badeedka ee ka dhexeeya labada dal lagu xalliyo qaab saaxiibtinimo. (tan micneheedu wuxuu yahay in Kenya ay rabto in Soomaaliya oggolaato in kiiska Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga la joojiyo oo khilaafka si hoose loo xalliyo)
DHULKA LAGU MURANSAN YAHAY.
Muran badeedka Soomaaliya iyo Kenya ayaa socday tan iyo 2009 markii heshiis is-afgarad ah loo saxiixay Dowladda Kenya. Waxaa xusid mudan in heshiiskaasi (2009) ka hor Kenya iibisay isla dhulka hadda muranku ka taagan yahay.
Shirkadaha ENI (Italy), Shell (Holland), Dominion Energy (USA), Total (France), Andarko (USA) iyo Tullow Oil (UK) ayaana lacago looga qaatay baarista shidaalka ee dhul badeedkan.
Baaxadda dhulkan ayaa dhan 100,000 sq kilometers (qiyaas ahaan 40,000 sq miles).
Shirkadda DNO oo Norway laga leeyahay ayaa iyaduna ka mid ah kuwa lacagaha bixiyay ee gadaal ka riixaya Kenya. Waxayna DNO marar badan isku dayday inay isu keento masuuliyiin sar-sare oo labada dowladood ka mid ah si ay si hoose ugu heshiiyaan.
Waddankii ku guuleysta lahaanshaha dhulkaasi wuxuu heli doonaa maamulka illaa 7 xirmo oo la xaqiijiyay in shidaal iyo gaas ka buuxo. Waxaana ka mid ah xirmooyinka (blocks) L5, L21, L22, L23, L24 iyo L26.
W.Q: Abdalle Ahmed Mumin